Badhasaabka Sool Oo Guddiyo U Magacaabay Covid-19 iyo Abaarraha | Gabiley News Online
April 11, 2021 - Written by admin
Badhasaabka gobolka Sool C/qani Maxamuud Jiidhe, ayaa magacaabay laba guddi oo ka hawl-gelaya arrimaha wacyigelinta caabuqa Covid-19 iyo wax ka qabashadda abaarraha.
Kadib markii uu badhasaabka xafiiskiisa kulan kula yeeshay isku-duweyaasha gobolka Sool, kaasoo diiradda lagu saaray arrimaha Covid-19 iyo abaarraha.
Guddiyadaasi oo isugu jira isku-duweyaasha wasaarradaha iyo haayadaha dawladda ee ka hawl gala gobolka Sool waxaa guddoomiye u ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool.
Badhasaabka Sool oo faahfaahin ka bixinayay kulankaasi iyo arrimihii lagu gorfeeyay waxa uu yidhi, “Waxaan maanta shirka toddobaàdlaha ah ee aan la yeelanno isku-duweyaasha gobolka Sool, aanu diiradda ku saarnay arrimaha Covid-19 iyo abaarraha.
Guddiga Covid-19 oo horre u jiray ayaan sii xoojinay, halka gudi kalena aan u xilsaarnay abaaraha. Waxaana hormood u noqon doona guddoomiye ku xigeenka gobolka Sool.
Waxaan ku boorinaya Bulshada gobolka, haayadaha iyo dhinacyada ku tacaluqa ka hortegga iyo la tacaalidda Covid-19, inay guddiga qaabilsan ay kala shaqeeyaan qaddiyadaha ku saabsan maaraynta safmarkan”.
Geesta kale badhasaabka ayaa xanuunka Coronavirus ku tilmaamay musiibo bini’aadanimo oo dunidoo dhan soo waajahday.
“Covid-19 waa masiibo ba’an oo dunidu waajahday, waxaa maaraynteeda dhib ka haystaa dawladaha ugu horumarsan caalamka . Dedaalka xooggan ee aan ka galnay iyo miisaankiisa waa mihiim in aynu fahansannaano.
Guddiga 2-aad ee arrimaha abaaraha, oo ka kooban gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool (Gudoomiye)
Isku-duwaha haayada Nadford
Isku-duwaha wasarada Xanaanada Xoolaha
Isku-duwaha Wasarada Beeraha
Isku-duwaha Wasarada Deegaanka
Isku-duwaha Wasarada Qorshaynta
Isku-duwaha Wasaarada Biyaha
Isku-duwaha Qaxoontiga iyo Barakacayaasha
Xoghayaha Gobolka Sool”.
Isagoo hadalka sii watayna waxa uu yidhi, “Waxaa xil ka saaran yahay in xog uruurin deg-dega ay ku dhaqaaqaan si macluumaad dhaba loo helo. Ganacsatada, qurba joogta gobolka, Culimada iyo qaybaha kale ee bulshada, waxaan ka codsanayaa inay si dhaw ula shaqeeyaan.
Maalmaha soo socda haddii Rabbi idmo, waxaa bilaabanaysa bisha barkaysan ee Ramadaan, Allaah nabad ha inagu gaadhsiiyo acmasheeda qiimaha leh-na kuwii ka faa’iidaysta Rabbi ha inaga yeelo”.
Gebagebadii badhasaabka Sool ayaa bulshadda ku baraarujiyay in ay ALLE SWT baryaan, si uu musiibooyinka taagan uga kor qaado.
“Ugu danbayn bulshada waxaan ku boorinayaa in wada-jir Rabbi loo baryo si uu inooga dulqaado Safmarkan Covid-19 iyo abaaraha.
Waxaan baayac-musharka u jeedinayaa inay u naxariistaan bulshadooda, madaama bisha barkaysa-na ay bilanayso” ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyay guddoomiyuhu.